Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » IBhodi yezoKhenketho yaseAfrika » Ibhodi yezoKhenketho yase-Afrika igcina iManyano: ngoku iseRwanda
IBhodi yezoKhenketho yaseAfrika • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Icandelo lokungenisa izihambi • iintlanganiso • iindaba • Iindaba zaseRwanda eziQhekezayo • Tourism • Iindaba zeWired Travel
Isiganeko soKhenketho eRwanda
USihlalo weBhodi yezoKhenketho yase-Afrika (ATB), uMnu. Cuthbert Ncube, wenze intetho kwisidlo sangokuhlwa esizinyaswe ngabaphathiswa bezokhenketho, oonozakuzaku, noosihlalo beebhodi ezahlukeneyo zokhenketho kunye nabasebenzi abangaphezulu kwama-3,000 abathathe inxaxheba kwiveki yoKhenketho yaseRwanda.
Uninzi lwamazwe ase-Afrika luvuka kwiindaba ezibuhlungu zamanye amazwe avale uhambo oluya kumazwe athile ase-Afrika ngenxa yokuqhambuka kwento entsha ye-COVID-19.
Eyona nto ifunwa yi-Afrika kukujongisisa nzulu kwaye imanyanise ngokupheleleyo isigqibo sayo kwaye yakha ilifa layo kunye neendlela zokubuyisela kwakhona ngaphakathi kunye phakathi kwayo kusetyenziswa ukhenketho njengecandelo elikhuthazayo ekuhlanganiseni zonke iinzame zamazwe zokuhambela ngaphaya kweziphumo ezibi ze-coronavirus kunye iintlobo zayo ezihlala ixesha elide eziqhubeka zikhula kude kube namhlanje.
Nangona iindaba ezibetha nzima ngenxa ye uhlobo olutsha lwe-coronavirus olubizwa ngokuba yi-B.1.1.529, bekukho uchulumanco kumsitho waseRwanda njengoko iinkokheli zezokhenketho zafumana amawonga okubulela kwindima yazo kwinzame zokubuyisela ushishino ukuza kuthi ga ngoku kushishino lokhenketho.
Yasekwa ngo-2018, iBhodi yezoKhenketho yase-Afrika (i-ATB) ngumbutho owaziwa ngamazwe ngamazwe ngokusebenza njengento ekhuthaza uphuhliso olunenkathalo lohambo nokhenketho ukuya, ukusuka, kunye nangaphakathi kwingingqi ye-Afrika. UMbutho ubonelela ngenkxaso ehambelanayo, uphando olunengqiqo, kunye neziganeko ezintsha kumalungu awo. Ngothelelwano namalungu ecandelo labucala kunye nelikarhulumente, iBhodi yezoKhenketho yase-Afrika iphakamisa ukukhula okuzinzileyo, ixabiso, kunye nomgangatho wohambo kunye nokhenketho e-Afrika. UMbutho ubonelela ngobunkokeli kunye neengcebiso kumntu ngamnye kunye nesiseko seqela kwimibutho engamalungu awo. I-ATB iyakhula kumathuba okuthengisa, unxulumano noluntu, utyalo-mali, ukuthengisa, ukukhuthaza, kunye nokuseka iimarike ze-niche. Ngolwazi oluthe kratya, Cofa apha.